> Resource> iPhone> Olee otú iji Chọta Lost iPhone Ndi ana-akpo
Ndị kasị manụ ihe ida gị iPhone bụ kọntaktị niile na-arahụ. Na-enweghị kọntaktị, ị nwere ike ghara agwa enyi na ndị ezinụlọ na ị na-efu na ekwentị gị, na ị ga mgbe mara ndị ga-ekwentị gị na ihe onye ahụ ga-eme na ya. Jụọ gị na ezinụlọ gị maka ego, ma ọ bụ mee mmekpahu oku ka ndị enyi gị? Ma nke ha bụ n'ezie ọjọọ. Ya mere, ihe mbụ i kwesịrị ime mgbe gị na iPhone furu efu ma ọ bụ zuru bụ-alaghachi azụ kọntaktị gị.
Olee otú ịchọta furu efu iPhone kọntaktị
N'ezie, mgbe ị na mmekọrịta gị na iPhone na iTunes, ya site a ndabere faịlụ maka ngwaọrụ gị, ma ọ bụ a ụdị SQLitedb faịlụ. N'ozuzu, ị nwere ike ịnweta ma ọ bụ gụọ ya ozugbo, ma na a nri data extractor ngwá ọrụ, ị nwere ike wepụ ọdịnaya site na ya, dị ka kọntaktị gị.
Ugbu a, iji chọta gị furu efu iPhone kọntaktị, chọta a furu efu iPhone kọntaktị extractor mbụ. Ọ bụrụ na ị ka na-adịghị nwere oke, ebe a bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows), irè omume na-enyere gị iji naputa unu niile iPhone ọdịnaya dị ka kọntaktị, SMS, photos, videos, na-akpọ ihe mere eme, wdg, n'agbanyeghị maka iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS, ma ọ bụ ndị ọzọ Apple ngwaọrụ.
Download free ikpe version nke usoro ihe omume n'okpuru ugbu a.
Cheta na: Ị nwekwara ike eji ma nke mmemme iji kpọmkwem iṅomi gị iPhone ịchọta gị ehichapụ data, mgbe ngwaọrụ gị bụ ka ebe a.
Ọzọ, ka ego esi achọta furu efu iPhone data si ndabere na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Iṅomi ihe ndekọ nke gị furu efu iPhone na gị Mac
Launching usoro ihe omume gị na Mac, ịhọrọ naputa site na iTunes ndabere File mode na ndị niile na iTunes ndabere na kọmputa gị ga-egosipụta. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa Malite iṅomi na-amalite adịrị nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Nzọụkwụ 2. naghachi furu efu iPhone kọntaktị
Mgbe Doppler, akpali na "Ndi ana-akpo" Atiya na sidebar nke usoro ihe omume. Ịnwere ike ihuchalu niile zuru ezu ọdịnaya nke kọntaktị gị tupu mgbake. Tinye akà rà anya ihe ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na gị Mac. Mgbe ahụ, ị nwere ike ijikwa ha na kọmputa gị, ma ọ bụ mbubata ha gị iPhone na Wondershare TunesGo.
Bara uru ụzọ iji chebe gị iPhone data
Kwado ndị AutoLock passcode atụmatụ;
Gbanyụọ gị iPhone si SIM mgbawa ozugbo o kwere omume;
Wụnye ihe iPhone nsuso ngwa dị ka Chọta My iPhone;
Ịgbanwe gị iTunes paswọọdụ.
Cheta na: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) nwekwara ekwe ka ị kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data si iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS, mgbe ị na-adịghị ihe iTunes ndabere.
Olee otú Resize Photos on iPhone - Ada Ada / Belata Photo Size